HP ProBook 4540s: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, ukubuyekeza
hardware Ikhompyutha ukhiqiza eziningi brand. Omunye wabo Hewlett Packard - sha ngokukhethekile womshini ikhompyutha okuphathelene nomngcele kanye nencwadi ozobhala kuyo. Phakathi umsebenzi laptop yakhe, waguquka ngokuphindaphindiwe izici, ikhodi izinombolo, ezihlukahlukene onobuhle, kodwa Nokho, i-laptop ngamunye, njenganoma iyiphi iphrinta, ivuliwe ngaphambili HP izinhlamvu - isibonakaliso sha, saba nema.
Lezi zincwadi esifanayo singasho nokuthi ukuziqhayisa laptop HP ProBook 4540s, esizokucabangela namuhla. Ngokuvamile, lokhu imodeli namuhla isikhundla ngempela banemizwa engqubuzanayo. Ngakolunye uhlangothi, akuseyona eseyintsha, futhi abanikazi ikwazi ukukutshela eziningi, ngakolunye uhlangothi, kungase futhi kube uthenge ezinye izitolo inthanethi.
ProBook futhi inkundla
Abantu abanentshisekelo laptops, kulula ngokwanele ukuba nowodwa model of inkundla. "Oh, leli-HP", - abanye bengasabeli. Ngesikhathi esifanayo igama ProBook uzokhumbula akubona bonke. Futhi ngisho ekukhangiseni, nakuba ngaphandle kokukhangisa, yebo, akenzanga. Iqiniso liwukuthi i-ProBook, ne-HP ProBook 4540s kuhlanganise thina futhi uthole ukuthola umthengi, kuyilapho inkundla, Positioning ngokwaso njengoba laptop elisha lazo zonke kudinga ukukhangisa njalo.
Bambalwa umsebenzisi onolwazi bangase bathole ukuthi inkundla - inguqulo baphumelela kakhudlwana, futhi lokho unwinds kungani ngaphezulu. Kodwa umnikazi wanoma iyiphi nouta enjalo bathi ibhethri okugcwele okuhlala amahora angu-3 .... Lona isilinganiso zonke izincwadi, kodwa HP ProBook 4540s Ukucaciswa uchaza esingokomfanekiso esihluke. Kulesi sibalo, beyizidlova 3:00 okungenani kabili, noma ngisho kathathu. Qedela ibhethri okusha laptop ezifana uyakwazi ukusebenza kusukela amahora 8 kuya ku-11 (!!!). Nakuba isibuyekezo wathola izinombolo, nokuningi. Yiqiniso, uma udlala kwezinye bafuna ithoyizi, le nkathi izoba zingancishiswa ngokushintsha izikhathi eziningana. Kodwa ngenkathi HP inkundla ziyokuwa ngokushesha ngisho.
Njengezinye abakhiqizi, HP has uchungechunge ezimbili notebook. Manje lokhu inkundla futhi ProBook. Kodwa ProBook, eyayaziwa EliteBook, njalo uya kusuka izingxenye kangcono kunenye umugqa. Lokhu akusho ukuthi ezinye umugqa mubi kakhulu, kodwa uma ibekwe njengoba notebook inkundla zonke Probook, ngokuvumelana onjiniyela, imele Professional laptop book- ibhizinisi.
Nge Pro Isiqalo waqonda, kodwa lokho kuyinto 4540s HP ProBook? Izibuyekezo ezibhaliwe mayelana kuye okuningi, ngezansi sethula izici eziyinhloko, futhi manje hamba phezu amabhlogo ngabanye.
Ukubonisa kanye ikhibhodi
brand Iningi, ukudala i-laptop, uyobeka zonke izingxenye zawo, kuhlanganise qapha. Kodwa, ngokungafani nezinye izinhlobo, HP, engasafuni ingozi, wanquma ukusebenzisa design yomunye, ngakho iningi HP ProBook 4540s wathola-matrix kusuka Philips - sha eyaziwako ukukhiqizwa ngabaqaphi namathelevishini.
Futhi inothi elinye futhi iphuzu mayelana esibukweni laptop. abantu Unolwazi ufuna izimoto nge screen matte. Ngakho, uma ufunda incazelo laptop yanoma yimuphi umkhiqizo, e-9 kwezingu-izimoto ezingu-10 noma izincazelo ungabhali, noma ukubhala "isikrini ecwebezelayo." Kodwa uma ukhetha "Probuk" - kuzodingeka isikrini matte. Edging kungaba isicwebezelisi, isicwebezelisi -under ikhava yangaphandle, kodwa isikrini matte, kuba isici kwanoma iyiphi imodeli, hhayi kuphela 4540.
Ngokuphambene esikrinini amagama ambalwa mayelana ikhibhodi kanye nezindlu. Leli bhokisi kufakwe uvalwe kakhulu, ndawo akukho creaks noma flex. Umehluko omkhulu phakathi kwalezi onobuhle singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela uhlelo ukupholisa, lapho phansi iKhabhinethi ngeke khiqiza phi izimbobo, okungukuthi, ephansi isivalo okuqinile. I-Laptop imi imilenze yayo, kodwa lonke ikhava eyodwa isiqeshana.
Lezi 4540 ezahlukene
Emzamweni ukufinyelela abathengi ezingaba ngaphezulu, onjiniyela ezikhishwe ukuhlukahluka ambalwa lokhu kuqhubeka notebook, kodwa zonke egqoka igama elilodwa ikhodi - HP ProBook 4540s. Izimpawu kakhulu zabo ezahlukene, kwelinye version kuyoba leyehlukene ihluzo ikhadi, elinye ikhambi okudidiyelwe "Intel". Kokunye disk 500 GB, elinye - 750, njll ...
Izimfuneko zesistimu, njengoba besho isofthiwe, kuzoba okulandelayo. Phawula ukuthi cishe wonke amamodeli we eyodwa ukugcwaliswa, ngaphandle umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ezimbalwa zalezi zingxenye ngenhla. Ngakho, HP ProBook 4540s. Ukucaciswa onobuhle esakhelwe ihluzo "Intel" kungabonwa ngezansi.
Ethebuleni akukho ulwazi mayelana nezinhlelo ifakiwe, kodwa ngokuvamile ukufaka noma cha ukufaka nomthengisi. Ngokusho umenzi ngalokhu ngezansi, esigabeni ngentengo.
abanikazi imicabango yabantu
Ukuze umthengi ezingase zivele, lolu phiko, cishe uyobe ezibaluleke kakhulu. Ake sibone ukuthi yini abasebenzisi bathini mayelana HP ProBook 4540s laptop. Impendulo ibilokhu muhle kakhulu. Ezinye inothi ukuthi ugqoko CD ivulekile kancane, ingasheshi phambi ukuvulwa 1-2 imizuzwana. Baningi impendulo mayelana ukubukeka - grey notch, ukufihla ukungcola nothuli. Izici kwekhibhodi imakwe okhiye isigamu-umcibisholo nokukhanya Ilokhi Caps Lock, esisogwini inkinobho uqobo. Othile amanothi eceleni mayelana okubonisa isibani ibuye - kule model, itholakala ngenhla nje isixhumi samandla, esemgwaqweni uhlangothi idrayivu ugqoko. Ngesikhathi esifanayo i-plug amandla ngqo - isikhala kakhulu kudingeka okungaphezu ekhoneni, kodwa ngezithukuthuku kancane lalihlehliswa isidleke ithuba ukudonsa kunzima. Njengoba nawo wonke amamodeli we-Pro Series, ukuvimba ikhiphedi ukuboniswa eceleni, okuyinto njalo Ukugunda.
Abaningi bhala mayelana abashayeli, kodwa lokho umbono jikelele HP. Isayithi wabeka abashayeli kuwo wonke amadivayisi njalo esikhishwa HP. Nasi okunzima ukuyiqonda, ngoba njengoba laptops, njengoba sekushiwo ngenhla, ungaba ukuhlukahluka eziningana ividiyo, ukuhlukahluka eziningana iphedi noma ikhamera. Kufanele uthele wonke, khona-ke qamba kabusha, bese ukuqonda - okulungile ngoba laptop yakho. Phawula futhi ukuntuleka ikhibhodi ukukhanya. Inkinobho ngakwesokunxele ku "Enter" kancane ephazamisayo, ikakhulukazi uma operation okusheshayo enganakile. Kuyaqapheleka futhi ukuthi, ngokungafani nezinye onobuhle, isembozo phansi esuswa ukuhamba ngezilayidi, iyafana ngokuqasha ibhethri, Nokho, akunjalo ezibucayi - ngezilayidi ezihambisanayo.
Iphawula kuphela langempela Izibuyekezo kumsebenzisi wale-laptop. Uma ubuka zonke imicabango yabantu, imibono kanye ukuhlolwa Yebo, ungathola okwengeziwe.
Ngaphambi kokuqhubeka esiphethweni, touch kancane ku inqubomgomo zamanani umenzi. Le mithetho kungukuthi njalo kugujwe, kodwa kunamasiko isisindo isisekelo kuba. laptops Iningi nezinye brand emananini yezindleko ilayisensi ye-Windows ne-Office iphakethe. HP usetha isofthiwe ubuncane, ukukhombisa ikhasimende ukuthi umshini selulayisheke emshinini wakho. Ngakho, izindleko laptop ishibhile kuka izimoto okulingana kusuka nezinye brand ku intengo namalayisense OS.
I-Laptop HP ProBook 4540s, eyakhululwa emakethe eminyakeni emibili edlule, namanje kukhompyutha ezinhle kakhulu mobile. Isethi ifektri eseke konke okudingayo umuntu osebenzisa ikhompyutha umsebenzi, kuhlanganise i-microphone bese ikhamera ukuthi akudingi ulwazi ekhethekile awabeka.
Lenovo Ideapad Z510 - isixazululo olinganiselayo ukuzijabulisa kanye nomsebenzi
HP 250-Notebook PC: Izici Nezibuyekezo
Indlela ukukhetha okuhle isabelomali amageyimu laptop, kodwa enamandla? isazi Izibuyekezo
NoJohn Brennan ozoba, umqondisi-CIA: Biography
Abantu ezinonileyo Ukraine: uhlu isilinganiso. 100 abantu abacebe kunabo bonke e-Ukraine
Izinyoka ezinesihlungu zezwe futhi Russia
Central Bank of Russia kanye nokwenza imisebenzi yayo
Ukushoshozela kwenhliziyo? Qalisa kudokotela!
Ekamelweni Cryogenic: incazelo izinhlobo, izici kanye nezici
Sectional kocingo ukhonkolo: izinhlobo nesithunzi